China 3D Motion Mixer High-efficiency Powder Mixer Material Blender စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ခုန်ပါ။
3D Motion Mixer စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Powder Mixer Material Blender
3D Motion Mixer စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Powder Mixer ပစ္စည်းBlender
1. အသုံးပြုမှုနှင့် လက္ခဏာများ
မောင်းနှင်တံဖြင့် မောင်းနှင်ထားသော ဆလင်ဒါသည် ဘာသာပြန်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် တုန်ခါခြင်းစသည့် ဒြပ်ပေါင်းလှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးကာ ဆလင်ဒါတစ်လျှောက်ရှိ ပစ္စည်းများ၏ သုံးလမ်းသွား ဒြပ်ပေါင်းရွေ့လျားမှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ အပြန်အလှန်စီးဆင်းမှု၊ ပျံ့နှံ့မှုကို သိရှိနိုင်ရန်၊ စုဆောင်းခြင်း စသည်တို့သည် အမျိုးမျိုးသော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ဆေးသောက်ခြင်း။တူညီသောရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာဖော်စပ်။
◎ ဤစက်၏ ရောစပ်ဆလင်ဒါသည် လမ်းကြောင်းများစွာတွင် ရွေ့လျားသည်၊ ပစ္စည်းသည် ဗဟိုပြု၍မရသော၊ တိကျသောဆွဲငင်အားကို ခွဲခြားထားခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာခြင်းနှင့် စုဆောင်းခြင်းမရှိပါ။အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် မတူညီသောအလေးချိန်အချိုးရှိနိုင်ပြီး ရောစပ်မှုနှုန်းမှာ မြင့်မားသည်။အမျိုးမျိုးတို့တွင် စံပြထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။mixers လက်ရှိမှာ
◎ စည်အားသွင်းနှုန်းသည် ကြီးမားပြီး 60% အထိ (သာမန်ဖြစ်သည်။mixer50% သာရှိပြီး ထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး ရောစပ်ချိန်တိုပါသည်။
◎ဆလင်ဒါ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည် တိကျစွာပွတ်တိုက်ထားသော arc transitions များဖြစ်သည်။
◎ ၎င်းကို ဆေးဝါး၊ ဓာတု၊ အစားအစာ၊ အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ စက်ယန္တရား၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် သတ္တုဗေဒနှင့် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအပြင် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနယူနစ်များ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဝါးနှင့် မီးတောက်သစ်များတွင် အမှုန့်နှင့် အမှုန့်များ ရောစပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။ retardant ပစ္စည်းများ။
2. စက်ပစ္စည်း ကန့်သတ်ချက်များ
ပမာဏ (L) : 200L (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်)
အများဆုံးတင်နိုင်သောအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်): 100 (စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်သည်)
လှည့်ပတ်မှုအရေအတွက် (r/min): 12
စုစုပေါင်းပါဝါ (kw): 2.2
အတိုင်းအတာ (LWH) (မီလီမီတာ): 1300*1600*1500
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) : 800
ယခင်- အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက် ပလတ်စတစ်ပုလင်း ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာဖြည့်စက်
နောက်တစ်ခု: စက်မှုအမှုန့် Pulverizer ကြိတ်စက် Grinder
Gas Electric Sauce Food Cooking Mixer Machine C...